LG G8 ThinQ: Nkọwapụta, Ahịa na Ntọhapụ | Gam akporosis
LG G8 ThinQ: Ọhụrụ dị elu nke akara Korea
Edere Ferreno | | LG, Mobiles
Firstbọchị mbu nke MWC 2019 hapụrụ anyị ọtụtụ akụkọ. Ọ bụ oge LG ugbu a. N’izu ndị a enwere ọtụtụ asịrị banyere ihe akara Korea ga-eweta na mmemme a. Ihe nlere mbu nke ndi Korea weputara anyi bu LG G8 ThinQ, ama ohuru ohuru ohuru. Ọzọ na-abịa na ọgụgụ isi na ọgbọ ọhụrụ a.
LG G8 ThinQ a nwere usoro ihe na-adọrọ adọrọ. Otu n’ime ha bụ na anyị na-ahụ kọmputa ga-eme ka anyị na-ege egwu. Akụkụ nke ga-ewepụta mmasị. Kedu ihe anyị ga-atụ anya site na njedebe ọhụrụ a nke akara Korea?
Banyere imewe, akara Korea na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ọkwa ọdịnala, kama notch n'ụdị a ntapụ mmiri. N'azụ ngwaọrụ a anyị hụrụ igwefoto atọ. Na mgbakwunye, ọ na-abịa na processor kachasị ike na ahịa gam akporo. Ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya nnukwu ike na ngwaọrụ LG.
1 Nkọwa LG G8 ThinQ
Nkọwa LG G8 ThinQ
Onye na emeputa ihe Korea enyeala igwe okwu n’ahu ya na ekwenti. Kama, na LG G8 ThinQ a bụ DAC ekwentị, Quad DAC 32-bit, bụ nke na-ahụ maka ịnyefe vibrations na iko ka o wee daa site na iko ahụ. O doro anya na ọ bụ njirimara kachasị ekwu na ụdị a nke ika a. Ya mere, anyị ga-ahụ otu o si arụ ọrụ na otu ndị ọrụ si emeghachi omume. Ndị a bụ nkọwa nke ngwaọrụ.
Nka na ụzụ nkọwa LG G8 ThinQ
Nlereanya G8 ThinQ
Usoro njikwa A gam akporo 9.0 achịcha
Ihuenyo 6.1 inch OLED nwere pikselụ Q3120 + mkpebi 1440 x 19.5 na oke 9: XNUMX
Nhazi Qualcomm Snapdragon 855
Nchekwa n'ime 128GB (gbasaa ruo 2TB na microSD)
Igwefoto na-aga n'ihu 16 MP obosara f / 1.9 + 12 MP f / 1.5 + 12 MP f / 2.4 telephoto
Igwe n'ihu 8 MP nwere f / 1.7
Njikọ Bluetooth 5.0 GPS FM Radio USB-C 4G WiFi 802.11 a / c
Atụmatụ ndị ọzọ N'azụ mkpisiaka agụ ihu ihu ude Aka ID NFC Nguzogide IP68
Batrị 3500 mAh na ngwa ngwa
Akụkụ X x 151.9 71.8 8.4 mm
Ibu ibu 157 grams
Ahịa Ka ekwenye
Dị ka a na-atụ anya ya n'ime njedebe ya dị elu, akara Korea ahọrọla ihuenyo OLED, nke kachasị elu na ahịa. Ọ bụ ihe gbasara a 6,1 nke anụ ọhịa ahụ size, na nhazi ihuenyo 19,5: 9 na mkpebi QHD +. N'ime LG G8 ThinQ anyị na-enweta ihe nhazi Snapdragon 855, nke kachasị ike na ahịa.
Anyị na-ahụ naanị otu ngwakọta nke RAM na nchekwa dị n'ime ngwaọrụ a. Ọ bịarutere na WiFi 5, anyị nwekwara NFC maka ịkwụ ụgwọ ekwentị na ngwaọrụ, gbakwunyere Bluetooth 5.0 na ya. Ọzọkwa FM Radio, nke ka bụ atụmatụ anyị na-ahụ n'ọtụtụ ụdị nke ika ahụ.
Ọzọkwa, otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu na ngwaọrụ a ga-abụ NJ aka. Ọ bụ ọrụ na-enye gị ohere ịmeghe ekwentị site na ịmara aka gị. LG G8 ThinQ nwere ikike ịkọwapụta ọdịdị, ọkpụrụkpụ na njirimara ndị ọzọ nke aka onye ọrụ. N'ihi ya, ọ ga-ekwe ka ụzọ ọzọ to kpọghee ekwt ngwaọrụ mgbe niile.
Maka batrị anyị na-achọta 3.500 mAh, nke na-agba ụgwọ ngwa ngwa. Banyere igwefoto, akara Korea ahọrọla igwefoto nwere okpukpu atọ, 16 + 12 + 12 MP, nke ga-enye gị ohere ịme foto buru ibu. Companylọ ọrụ ahụ ejirila ihe mmetụta sensọ, dị ka obosara sara mbara na telephoto. Yabụ na anyị agaghị enwe foto nkịtị na ekwentị, n'ihi mbugharị ngwa anya na akụkụ sara mbara, na mgbakwunye na ịnwe nhọta na ọnụnọ nke ọgụgụ isi. Ekele ya anyị nwere ụdịdị foto ndị ọzọ na ekwentị.
N'ikpeazụ, anyị na-ahụ ọrụ ọzọ nke mmasị na ngwaọrụ a. A na-akpọ ya Motion, nke bụ ụfọdụ mmegharị ikuku na anyị nwere ike ime n'ihu igwefoto n'ihu nke ekwentị. N'ihi mmegharị ndị a ọ ga-ekwe omume ị kpọghee ekwentị. Ọzọkwa were screenshots, -enwe ike ịkpọ ma ọ bụ ọbụna ịgbanwee n'etiti otu ngwa na ọzọ. Ọ nwere ike ịbụ ọrụ bara uru n'ọnọdụ dịka ịnya ụgbọ ala. Ọ bụ ezie na anyị ga-ahụ otu o si arụ ọrụ.
E gosipụtarala LG G8 ThinQ na MWC 2019. Ọ bụ ezie na ugbu a Onweghi ihe ekwuru banyere igba egbe site na njedebe dị elu nke akara Korea. Anyị enweghị ụbọchị ọ bụla maka mbata ya na ụlọ ahịa n'oge a. Ya mere, anyị ga-echere ka ika gwakwuo anyị banyere ya.
Banyere ego nke ekwentị a ga-enwe Anyị enweghị ozi ọ bụla mgbe anyị rutere n'ụlọ ahịa. Mara ngwaọrụ ndị a, anyị nwere ike ịtụ anya na ọ ga-adị oke ọnụ. Ọ bụ ezie na ọ dịbeghị ihe ọ bụla ekwuru. Anyị nwere olile anya ịnụ site na ngwaọrụ a ụbọchị ole na ole.
Kedu ihe ị chere gbasara LG G8 ThinQ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG G8 ThinQ: Ọhụrụ dị elu nke akara Korea
Pricegwọ nke Xiaomi Mi 9 asịrị
TCL gosipụtara mpịachi ekwentị ya na DragonHinge na igwefoto dị iche iche na MWC 2019